Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247591 times)
« Reply #510 on: August 17, 2011, 04:01:28 PM »
" သ တင်း ကောင်း "
လေ့လာရေးခရီး ထွက်သူ နှစ်ယောက် တောနက်ထဲ ရောက်နေကြသည် ။ တစ်နေရာတွင်
ဂူ တစ်ခုကို မြင်သည် ။ သိလိုစိတ် ပြင်းပြသည်နှင့် ဂူထဲဝင်ကြသည် ။ ဂူ မှာ အတော်နက်သော ဂူ ဖြစ်နေသည်။
ကံဆိုးချင်တော့ ဂူထဲရောက်ပြီး မကြာမီမှာပင် ဂူထဲက ခြေသံ နှင့် ကြောက်စရာဟိန်းသံများ ကြားရသည် ။ သို့ နှင့်
ပါလာသော ၀ိုင်ယာလက်စက်ငယ်ဖြင့် အကူအညီတောင်းသည် ။ တစ်ဖက်မှ ပြန်မေးသည် ။
" ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာ ရောက်နေကြသလဲ.. "
" ရွှံ့ အိုင်နားက ဂူတစ်ခုထဲမှာ.. ကျနော်တို့အပြင်ထွက်လို့မရဘူး...ပြီးတော့
သားရဲ တစ်ကောင် အထဲမှာ ရှိနေတယ်.... "
" မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျားတို့ အတွက် သတင်းနှစ်ခု ပေးနိုင်တယ်.. တစ်ခုက သတင်း
ကောင်း ၊ နောက်တစ်ခုက မကောင်းတဲ့ သတင်း.. "
" မကောင်းတဲ့ သတင်းကို စပြောဗျာ.. "
" အဲ့ဒီ ဂူဟာ ၀က်ဝံကြီး နေတဲ့ ဂူ ဗျ. "
" ကောင်းတဲ့ သတင်းကကော "
" ၀က်ဝံမ သူ့ ဆီက ထွက်ပြေးသွားတယ်.... ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ ကို သူ စားမှာ
« Reply #511 on: August 17, 2011, 04:14:29 PM »
" ဘာ ဗုံး လဲ "
ဆိုဗီယက် ခေတ်က ဖြစ်သည် ။ စစ်ဌာနချုပ် တစ်ခုတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး
အခြေအနေများကို ရှင်းပြနေသည် ။
" အမေရိကန် ကျူးကျော်ရေးသမားတွေဟာ နောက်ဆုံးပေါ် ဗုံးတစ်မျိုးကို
တီထွင် ထုတ်လုပ်လိုက်ကြပြီ..။ နျူထရွန် ဗုံး တဲ့..၊ ဒီဗုံး ပေါက်ကွဲတဲ့အခါ
သက်ရှိလူတွေ အားလုံး သေကြပြီး သက်မဲ့ ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတွေကျတော့
ဘာမှ မဖြစ်ဘူး... "
နောက်ဆုံးတန်းတွင် ထိုင်နေသော ရဲဘော် တစ်ယောက်က မကြားတကြား
" ကျနော်တို့ တွေ ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ ဆိုင်ပေါ်က ပစ္စည်းတွေအားလုံး ပျောက်သွား
ရအောင် အခု သူတို့ က ဘာဗုံးကို ပစ်ချလိုက်တာလဲ ဟင်.. "
« Reply #512 on: August 17, 2011, 04:30:45 PM »
" မိန်း မ ကို ချစ် တယ်. "
မော်စကို ရုပ်မြင်သံကြားစက် ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံမှ အလုပ်သမား လေးယောက်သည်
စက်ရုံထွက် ရုပ်မြင်သံကြားစက် တစ်လုံးကို စာရင်းမပြဘဲ အပြင်သို့ရောင်းထုတ်လိုက်သည် ။ ရသည့်
ပိုက်ဆံကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ကြသည် ။ တစ်ယောက်က စပြောသည်။
" ပျော်ပွဲစားရုံ့သွားပြီး စားသောက်လိုက်ကြရအောင် "
ဒုတိယ တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
" စက်ရုံက ကောင်မလေးတွေ ခေါ်ပြီး မြို့ ပြင်မှာ ပျော်ပွဲစား သွားကြရအောင် "
တတိယလူက အကြံပေးသည် ။
" ငါတို့ မိန်းမတွေကို လက်ဆောင်ကိုယ်စီ ၀ယ်ပေးကြရင် မကောင်းဘူးလား.. "
စတုတ္ထလူက ကန့် ကွက်သည် ။
" ဘယ်လိုမှ လုပ်မနေနဲ့ ..ရတဲ့ပိုက်ဆံကို အညီအမျှခွဲပြီး ကိုယ့်မိန်းမတွေ အကုန်လုံး
ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းမရဘဲ ဖြစ်နေရာ နောက်ဆုံးတွင် တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
" ကိုင်း....ဒီလို လုပ် ၊ ခေါင်း ပန်း လှန်မယ်...၊ ခေါင်းကျရင် ပျော်ပွဲစားရုံ သွားမယ်..
ပန်းကျရင် ကောင်မလေးတွေ ခေါ်ပြီး မြို့ ပြင်ထွက်မယ်..၊ ခေါင်းမဟုတ် ပန်းမဟုတ်
တည့်တည့် ထောင်နေတယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေကို လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးမယ်.... အဲ.
အောက်မကျပဲ လေထဲမှာ တန့် နေမယ် ဆိုရင်တော့ မိန်းမလက်ကို အကုန်အပ်မယ်
« Last Edit: August 18, 2011, 10:14:20 AM by tunaye2011 »
« Reply #513 on: August 18, 2011, 12:33:44 PM »
" ပြန် ပြောင်း သ တိ ရ တယ်. "
မှောင်စပြုသည့် တစ်ညနေခင်းတွင် အသက် ၆၀ ကျော် အဘိုးကြီးနှင့် အဘွားကြီး
လင်မယားစုံတွဲ ပန်းခြံထဲ လမ်းလျှောက်နေကြသည် ။ တစ်နေရာတွင် ခုံတန်းရှည်တစ်ခု၏ အစွန်း
တစ်ဘက်တွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ကြသည် ။ ရုတ်တရက် မိမိတို့ထိုင်နေသော ခုံတန်းရှည် ၏ အခြား
တစ်ဘက်စွန်းတွင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် စုံတွဲ တစ်တွဲ သဲသဲမဲမဲ နမ်းရှုတ်နေသည်ကို ၄င်းတို့သတိ
ထားမိကြသည် ။ ဂွကျသော အခြေအနေသို့ရောက်နေပြီ ဟု နှစ်ယောက်စလုံး သဘောပေါက်လိုက်
ကြသည် ။ သို့ နှင့် အဘွားကြီးက ပြောသည် ။
" ကျုပ်တို့ရှိနေတယ် ဆိုတာ သူတို့ သိအောင် ချောင်းလေးဘာလေး ဟန့် 
လိုက်ပါလား ရှင့်.. "
" မဟန့် နိုင်ဘူး..လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၄၀ က ငါ့ကို ဘယ်သူမှ ချောင်းဟန့် ခဲ့တာ
မဟုတ်ဘူး ကွ. "
« Reply #514 on: August 18, 2011, 12:42:19 PM »
" မီ နိုင် သေး တယ် "
အမျိုးသမီး ၏ နောက်သို့လူငယ်တစ်ယောက် ပြေးလိုက်လာပြီး ပြောသည် ။
" ဒီမှာ ခင်ဗျာ....ဒီမှာ ခင်ဗျာ.. "
အမျိုးသမီး ပြန်လှည့်လာပြီး မေးသည် ။
" ကျမကို ခေါ်တာလား.....ဘာကိစ္စလဲ "
" ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ထီးမေ့ကျန်ခဲ့တာ ခင်ဗျားလား.. "
အမျိုးသမီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည် ။
" ဟုတ်ပါရဲ့ ...ကျမ ထီး မေ့ကျန်ခဲ့တယ်.. "
" အဲ့ဒါဆို မြန်မြန် ပြေးလိုက်.... ကားက အခုမှ ထွက်ခါစ ရှိသေးတယ်.. "
« Reply #515 on: August 18, 2011, 12:51:49 PM »
အဝေးပြေး ရထားပေါ်တွင်ဖြစ်သည် ။ အထက်တန်းစားထဲက ဖြစ်ဟန်တူသော အမျိုးသမီးသည်
ညပိုင်းရောက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် အိပ်စက်အနားယူရန် ပြင်သည် ။ သို့ သော် ဘယ်လိုပဲ အိပ်ဖို့ ကြိုးစား ကြိုးစား
အိပ်လို့မရချေ..။ အကြောင်းမှာ တစ်ဖက်ခန်းမှ ကျယ်လောင်သော ဟောက်သံကို တစ်ချိန်လုံး ကြားနေ
ရသောကြောင့် ဖြစ်သည် ။ မတတ်နိုင်တော့သည်နှင့် နံရံကို ထုသည် ။ ဟောက်သံ တိတ်မသွားချေ.။ ဆက်
ကာ ဆက်ကာ ထုသည် ။ မထူးခြားချေ ။ အမျိုးသမီးသည် လုံးဝ မအိပ်နိုင်ပဲ လူးလှိမ့်ကာနှင့် မိုးစင်စင်
လင်းသွားသည် ။ နံနက် ရောက်သောအခါ တစ်ဖက်ခန်းမှ လူကို အမျိုးသမီး ပြောသည် ။
" ဘယ်လိုလဲ..ရှင့်...၊ ရှင် အတော် အအိပ်ကြီးတဲ့သူပါလား...။ ကျမ တစ်ညလုံး
နံရံကို ထုနေတာ ရှင် မကြားဘူးလား... "
" ကြားတော့ ကြားသား...၊ ဒါပေမဲ့ အရမ်း ပင်ပန်းနေတာနဲ့ခင်ဗျား ခေါ်တာကို
မလာတာပါ ....ဆောရီးပဲ ညီမရေ.. "
« Reply #516 on: August 18, 2011, 01:05:40 PM »
" ပုန်း ဘို့နေ ရာ "
အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂဆိုင်သို့ရောက်လာပြီး
သာမန်ထက် ပို မြင့်သော ဗီရို တစ်လုံး ရောင်းရန် ပြောသည် ။ အရောင်းစာရေး
က မေးသည် ။
" အစ်မကြီးရဲ့အိမ်မျက်နှာကြက်က တော်တော် မြင့်လို့ လား.. "
" ဒါကြောင့် မဟုတ်ဘူး.. အိမ်နီးချင်း ယောင်္ကျားက အရပ်မြင့်လို့"
" တန် ဘိုး မ ရှိ သော လူ "
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အလောင်းအစား လုပ်ကြသည် ။ တက္ကစီ တစ်စီး
လှမ်းတားလိုက်ပြီး တစ်ယောက်က တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာကို မေးသည် ။
" ဒီကနေ မြို့ ထဲကို ဘယ်လောက် ပေးရမလဲ.. "
" ထောင့်ငါးရာ.. "
" ကျနော့် သူငယ်ချင်းပါ ကျနောနဲ့လိုက်မယ် ဆိုရင်ကော "
" ထောင့်ငါးရာပါပဲ .. "
" ကြားတယ်မဟုတ်လား..ဘမောင်... မင်းဟာ ဘာမှ တန်ဘိုး မရှိတဲ့
ကောင် ဆိုတာ ယုံပြီလား.. "
« Reply #517 on: August 19, 2011, 09:36:08 AM »
" ဆောင်း ဦး ပေါက် "
ပြတိုက်ကြီး တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည် ။ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသည် ယောင်္ကျားပီသသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ရှိ ရှေးခေတ်
ဂရိ စစ်သည်တော် ၏ ရုပ်ထုကို ငေးကြည့်နေကြသည် ။ ရုပ်ထုမှာ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သည် ။ ရှက်ရမည့် " တစ်နေရာ " တွင်
သာ သစ်ရွက်ဖြင့် ဖုံးထားသည့်ပုံ ဖြစ်သည် ။
တစ်ယောက်က ကြည့်ရတာ အားရပြီ ဖြစ်၍ နေရာမှ ထွက်ခွါရန် ပြင်သည် ။ အဖော်ဖြစ်သူ အမျိုးသမီးမှာမူ ကြည့်မ၀
သေးဟန်ဖြင့် နေရာမှ မလှုပ်ချေ..။ သို့ နှင့် သွားလိုသူက ပြောသည် ။
" မေရီ..ဘယ်လိုလဲ..၊ နှစ်သစ်ကူးတဲ့အထိ ရပ်ကြည့်နေမလို့ လား.. "
" ဟင့်အင်း...ဆောင်းဦးပေါက် သစ်ရွက်တွေ ကြွေတဲ့အထိလောက်ပါပဲ.. "
« Reply #518 on: August 19, 2011, 09:43:42 AM »
" ကြီး နေ သ လား ပဲ "
အိမ်နီးချင်း အန်တီမြဆီ ဒေါ်စိန်ပု ရောက်လာသည် ။ အန်တီမြ ဘူးသီးကြော်နေသည်နှင့်
ကြုံနေသဖြင့် ဘူးသီးကြော် စားပါ ဟု အန်တီမြ ပြောသည် ။ ဒေါ်စိန်ပု အားရပါးရ ယူစားသည် ။
အလျင်မီအောင် အန်တီမြ ကြိုးစား ကြော်ရသည် ။ ပလုပ်ပလောင်း စားနေရင်းက ဒေါ်စိန်ပု ပြောသည် ။
" မမြရဲ့ဘူးသီးကြော် သိပ်ကောင်းပါလား.. ကြွတ်ရွနေတာပဲ..တစ်ခုပဲ
ပြောစရာ ရှိတယ်... နည်းနည်း ကြီးနေသလားလို့"
" ကြီးမှာပေါ့... ပါးစပ်ထဲကို ရှင်က နှစ်ခု..နှစ်ခု ထည့်တာကိုး... "
« Reply #519 on: August 19, 2011, 09:58:47 AM »
" မြို့မေ တ္တာ ခံ ယူ တဲ့ သား ပေ မို့"
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်ကြီးသည် မိမိအပေါ် ပြည်သူများ မည်သို့သဘောထားသနည်း
ဆိုသည်ကို သိလိုသည်နှင့် မိမိကိုယ်မိမိ ဓါတ်ဆီ လောင်းပြီး သတ်သေလိုက်သည် ဟု သတင်းလွှင့်လိုက်
သည် ။ ကိုယ်တိုင်ကမူ ရုပ်ဖျက်ပြီး မြို့ ထဲထွက်သည် ။ မြို့ လည်တစ်နေရာတွင် လူများ ၀ိုင်းအုံနေကြသည်
ကို မြင်ရာ တစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးသည် ။
" ဘာဖြစ်လို့ လဲဗျ. "
" ခင်ဗျား မသိသေးဘူးလား....ကျနော်တို့ ရဲ့အချစ်ရဆုံး ခေါင်းဆောင်ကြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်
မီးရှို့သတ်သေသွားသတဲ့... ဒါနဲ့သူ့ ရဲ့ကျန်ရစ်သူ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို ကူညီဘို့ 
ဆိုပြီး ကျနော်တို့အလှုခံ နေကြတာလေ.. "
ခေါင်းဆောင်ကြီး အတော် ကြည်နူးသွားသည် ။
" ခင်ဗျားတို့ ဟာ စိတ်ထား မြင့်မြတ်ကြတဲ့သူတွေပါလား... ဒါနဲ့အလှူခံတာ အတော်ရပြီလား "
" မိနစ်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ်... ဓါတ်ဆီ ဂါလံ ၅၀ ရပြီ... "